Ivo vanogona kumanikidza Apple kutibvumidza isu kuti tiise maapplication kubva kunze kweApp Store | IPhone nhau
Kunyangwe kutonga kwekupedzisira kuchiri kuzofanirwa kusvika, chimwe chinhu chinoratidzika kunge chakaoma, idzi dzinogona kuve nhau huru kune avo vanoda kubira zvikumbiro kana kune avo vanoda kuvabhadhara zvishoma pavari vachibaira kumwe kuchengetedzeka: maererano Reuters, iyo 9th US Circuit Dare redzimhosva rakatonga nezuro kuti vashandisi tine kodzero yekumhan'arira Apple ichiti avo vari muCupertino vagadzira monopoly muindasitiri yeapp nekubvumira vashandisi veIOS ingoisa maapplication kubva kuApp Store.
Chisarudzo ichi chakadzora chisarudzo chakaitwa nedare risingakoshe muna 2013, iro rakatsigira Apple. Iyo kambani inotungamirirwa naTim Cook yakamhan'arira kuti yairoja nzvimbo muApp Store, izvo zvaireva kuti vashandisi havana kodzero yekumhan'arira Apple pakutanga. Ivo vanobva kuCupertino vanovimbisa izvozvo, nekuti vagadziri vanoisa iwo mutengo ivo pachavoIvo chete ndivo vane mhosva kumatare edzimhosva, asi dare rekukumbira rakashandura nharo iyoyo.
Isa mapurogiramu kubva kunze kweApp Store pane iOS? Zvakaoma asi hazvigoneke
Mhosva yakatanga mu2012, pavasina kubvumirana nemutambo weCupertino wekungobvumidza vashandisi kumhanyisa maficha anobva kuApp Store, izvo zvairevawo kuti vakabvumidzwa navo. Iyo kesi, inonzi Pepper et al v. Apple Inc, inopomera kuti tsika yaApple yekumanikidza isu kushandisa chayo chitoro chinotungamira kune kushomeka kwemakwikwi uye mitengo yakakwira. Kugadziriswa kwanhasi hakutaure nezve zvirevo zvakapfuura, asi zvinongoti vashandisi vanogona kumhan'arira Apple, iyo yaizotanga kutongwa kutsva iyo, pamwe, tingazopedzisira tarasikirwa.
Chinangwa cheiyi kesi ndechekuti Apple ivhure iyo ecosystem yezvishandiso ku bvumira vashandisi kutenga uye kurodha kunyorera kubva kune wechitatu-bato masosi. Kune rimwe divi, sezvatatsanangura kare, zvinoita sezviri nyore kuti mune ramangwana tinokwanisa kurodha maapplication kubva kune imwe saiti isiri iyo App Store, asi zvinogona kubhadharwa mukukuvara kuri kutsvagawo
Imwe nzira ndeyekuti Apple ibhadhare vanhu kukuvara pamitengo yayo yepamusoro pane iyo makwikwi avakafanirwa kubhadhara kare nekuti Apple yakashandisa kuzvitonga.
Mune mawonero angu, kune rumwe rutivi ndinobvuma zvachose kuti isu tinofanirwa kuisa kunyorera kubva kunze kwechitoro chepamutemo. Sarudzo, chero bedzi dzisingakuvadze mashandiro echimwe chinhu, anogara akanaka. Kune rimwe divi, zvinoita kwandiri kunge zvisingaite kuti zvese izvi zvichachinja mune ramangwana, uye kiyi inoita kunge ndeyekuti ivo vagadziri vanoisa mutengo pane zvavanoshandisa. Kana zvirizvo, maapplication anofanira kunge ari iwo mutengo chero kwavanenge vari.
Sokunge izvo zvaive zvisina kukwana, isu tinofanirwa kudaro chengetedza kuchengetedzeka mupfungwa: Nguva nenguva isu takaburitsa yakaipa nhau ichitaura kuti chirongwa chakaipa chakapinzwa muApple app chitoro, saka chii chingaitika muchitoro chine zvishoma zvidziviriro matanho? Ehezve, isu tinogona kugara tichifunga kusatora aya mafomu. Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Ivo vanogona kumanikidza Apple kutibvumidza isu kuti tiise maapplication kubva kunze kweApp Store